Show All Most Popular Prawn Dimsum Fish Dimsum Pork Dimsum Chicken Dimsum Dimsum Set Menu (Raw) Noodle Chicken Dishes Pork Dishes Beef Dishes Mutton Dishes Fish Dishes Duck Dishes Prawn Dishes Squid Dishes Crab Dishes Salad Eel Dishes Claypot Appetizer Vegetables Soup Hot Plate One Portion
Dimsum Set Menu (Raw)
65 Street, Between 26 Street & 27 Street, Mandalay, MM Chanayethazan
Sunday7 AM - 20:30
Monday7 AM - 20:30
Tuesday7 AM - 20:30
Wednesday7 AM - 20:30
Thursday7 AM - 20:30
Friday7 AM - 20:30
Saturday7 AM - 20:30
S11.Stream Clear Shrimp (ပုဇွန်နိုင်လွန် )(ပုဇှနျနိုငျလှနျ )
S10.Shrimp with Seaweed (ပုဇွန် ရေညှိ )(ပုဇှနျ ရညှေိ )
C12.Streamed Chicken Sauage (ကြက်အူချောင်း )(ကွကျအူခြောငျး )
P18.Streamed Pork Wanton (၀က်သားပေါင်း)(ဝကျသားပေါငျး)
F9.Fried Fish with Pastry (ငါးအသားလိပ်ကြော်)(ငါးအသားလိပျကွျော)
Shrimp with Tofu (ပုဇွန်ပဲပြား )(ပုဇှနျပဲပွား )
C8.Chicken Rolled in Pan Egg (ကြက်ဥလိပ်ရှည်)(ကွကျဥလိပျရှညျ)
C3.Back with Chicken (ကြက်ဆေးဘဲဥ )(ကွကျဆေးဘဲဥ )
P3.Streamed Triple Pork (၀က်သားသုံးပွင့်ဆိုင် )(ဝကျသားသုံးပှငျ့ဆိုငျ )
P9.Butterfly Clear Pork (၀က်နိုင်လွန်လိပ်ပြာ)(ဝကျနိုငျလှနျလိပျပွာ)
Shirmp balls with Cauliflower (ပုဇွန်လုံးပန်းပွင့်)(ပုဇှနျလုံးပနျးပှငျ့)
S3. Streamed Minced Shrimp (ပုဇွန်ပေါင်း )(ပုဇှနျပေါငျး )
S4.Stremed Shrimp with Chicken (ကြက်ပုဇွန်လုံး)(ကွကျပုဇှနျလုံး)
S5.Stremed Shrimp (ပုဇွန်ဖက်ထုပ်ပေါင်း )(ပုဇှနျဖကျထုပျပေါငျး )
S6.Golden Prawn (ပုဇွန်ရွှေရောင်ပေါင်း )(ပုဇှနျရှရေောငျပေါငျး )
S7.Prawn Tail Neutralize (ပုဇွန်မြှီးထောင် )(ပုဇှနျမွှီးထောငျ )
S8.Pork Shrimp & Baby Corn (၀က်ပုဇွန်ပြောင်းဖူး )(ဝကျပုဇှနျပွောငျးဖူး )
S9. Stream Crab Thumb with Shrimp & Mush (မှိုပုဇွန် ဂဏန်းပေါင်း )(မှိုပုဇှနျ ဂဏနျးပေါငျး )
F1. Fish with Seaweed (ငါးရေညှိ )(ငါးရညှေိ )
F3.Fish with Seaweed Hair (ငါးပိုက်ကွန် )(ငါးပိုကျကှနျ )
O5.Fried Seasame Ball (နှမ်းလုံးကြော် )(နှမျးလုံးကွျော )
O6.Fried Black Bean in Sticky Rice Flour (ပဲကောက်ညင်းကြော်)(ပဲကောကျညငျးကွျော)
P4.Streamed Pork Clear Wanton (၀က်နိုင်လွန်ဖက်ထုပ် )(ဝကျနိုငျလှနျဖကျထုပျ )
P6.Quail Egg with Pork Colon (ငုံးဥ၀က်အူမ )(ငုံးဥဝကျအူမ )
P7.Pork Quail Egg Wanton (၀က်ငုံးဥဖက်ထုပ် )(ဝကျငုံးဥဖကျထုပျ )
P10.Pork Topped with Squaild (၀က်ပြည်ကြီးငါးအစာသွပ် )(ဝကျပွညျကွီးငါးအစာသှပျ )
P11.Pork with GoldenEgg (၀က်သားဘဲဥအငံ )(ဝကျသားဘဲဥအငံ )
P12.Pork Rolled in Pan Egg (၀က်ကြက်ဥလ်ိပ်)(ဝကျကွကျဥလိပျ)
P13.Pork Dumpling (၀က်သားပေါက်စီ)(ဝကျသားပေါကျစီ)
P14.Pork Clear Dumpling (၀က်နိုင်လွန်ပေါက်စီ )(ဝကျနိုငျလှနျပေါကျစီ )
P15.Streamed Pork Wanton (၀က်ဖက်ထုပ်အစ်ိုပေါင်း)(ဝကျဖကျထုပျအစိုပေါငျး)
C4.Streamed Chicekn Clear Wanton (ကြက်နိုင်လွန်ဖက်ထုပ် )(ကွကျနိုငျလှနျဖကျထုပျ )
C5.Chicken Dumpling (ကြက်ပေါက်စီ)(ကွကျပေါကျစီ)
C9.Streamed ChickenWanton (ကြက်သားပေါင်း)(ကွကျသားပေါငျး)
C11.Chicken Topped with Crab Meat Stick (ကြက်ဂဏန်းအသားလိပ် )(ကွကျဂဏနျးအသားလိပျ )
ပုဇွန်ရေညှိ -၂ခု ၊ ပုဇွန်ပိုက်ကွန် ၂ခု ၊ ပုဇွန်နိုင်လွန် ၂ခု ၊ မှိုပုဇွန်ဂဏန်းပေါင်း ၁ခု ၊ ပုဇွန်ပေါင်း ၁ခု ၊ ပုဇွန်ပဲပြား ၁ခု ( ပုဇှနျရညှေိ -၂ခု ၊ ပုဇှနျပိုကျကှနျ ၂ခု ၊ ပုဇှနျနိုငျလှနျ ၂ခု ၊ မှိုပုဇှနျဂဏနျးပေါငျး ၁ခု ၊ ပုဇှနျပေါငျး ၁ခု ၊ ပုဇှနျပဲပွား ၁ခု)
ကြက်သားပေါင်း ၁ပေါင်း ၊ ပြည်ကြီးငါး ၁ပေါင်း၊ ကြက်ဥလိပ်ရှည် ၁ပေါင်း၊ ဆေးဘဲဥ ၁ပေါင်း ၊ ကြက်အူချောင်း ၁ပေါင်း၊ ကြက်ဂဏန်းအသားတု ၁ပေါင်း ၊ ကြက်ပုဇွန်လုံး ၁ပေါင်း၊ ပုဇွန်မြှီးထောင် ၁ပေါင်း (ကွကျသားပေါငျး ၁ပေါငျး ၊ ပွညျကွီးငါး ၁ပေါငျး၊ ကွကျဥလိပျရှညျ ၁ပေါငျး၊ ဆေးဘဲဥ ၁ပေါငျး ၊ ကွကျအူခြောငျး ၁ပေါငျး၊ ကွကျဂဏနျးအသားတု ၁ပေါငျး ၊ ကွကျပုဇှနျလုံး ၁ပေါငျး၊ ပုဇှနျမွှီးထောငျ ၁ပေါငျး)
၀က်ကြက်အူလိပ် ၁ပေါင်း ၊ ၀က်ဖက်ထုပ်အစိုပေါင်း ၁ပေါင်း ၊ ၀က်သားပေါင်း ၁ပေါင်း ၊ ၀က်ပုဇွန် ၊ ပြောင်းဖူး ၁ပေါင်း ၊ ရွှေရောင်ပူဇွန် ၁ပေါင်း ၊ ငုံးဥ၀က်အူမ ၁ပေါင်း ၊ ၀က်သားဘဲဥငံ ၁ပေါင်း (၀ကျကွကျအူလိပျ ၁ပေါငျး ၊ ဝကျဖကျထုပျအစိုပေါငျး ၁ပေါငျး ၊ ဝကျသားပေါငျး ၁ပေါငျး ၊ ဝကျပုဇှနျ ၊ ပွောငျးဖူး ၁ပေါငျး ၊ ရှရေောငျပူဇှနျ ၁ပေါငျး ၊ ငုံးဥဝကျအူမ ၁ပေါငျး ၊ ဝကျသားဘဲဥငံ ၁ပေါငျး )
Thai Style Hot & Sour Noodle (ယိုးဒယား လှေပေါ် ချဉ်စပ်ခေါက်ဆွဲ)(ယိုးဒယား လှပေျေါ ခဉျြစပျခေါကျဆှဲ)
Thai Style Steamed Beef Noodle (ယိုးဒယားအမဲပေါင်းခေါက်ဆွဲ)(ယိုးဒယားအမဲပေါငျးခေါကျဆှဲ)
Steamed CP Chicken Noodle (CP ကြက်ပေါင်း ခေါက်ဆွဲ) (CP ကွကျပေါငျး ခေါကျဆှဲ)
Shan Noodle (ရှမ်းခေါက်ဆွဲ )(ရှမျးခေါကျဆှဲ )
Wheat Noodle (ဂျုံ)(ဂြုံ)
Steamed Burmese Chicken Noodle ( ဗမာကြက်ပေါင်း ခေါက်ဆွဲ) (ဗမာကွကျပေါငျး ခေါကျဆှဲ)
Steamed Chicken Soup ( ကြက်ပေါင်းအလွတ်) (ကွကျပေါငျးအလှတျ)
001 Deep Fried Spicy Chicken Tendan(ကွကျကွောခွောကျစပျ)(ကြက်ကြောခြောက်စပ်)
002 Szechuan Style Deep Fried Chicken(စီခြှမျကွကျခွောကျကွျော)(စီချွမ်ကြက်ခြောက်ကြော်)
003 Deep Fried Chicken(ကွကျခွောကျကွျော)(ကြက်ခြောက်ကြော်)
004 Fried Fragrant Chicken(ကွကျမှေးကွျော)(ကြက်မွှေးကြော်)
005 Crispy Fried Chicken(ကွကျကွှတျကွျော)(ကြက်ကြွတ်ကြော်)
006 Chicken in Beer(ကွကျဘီယာ)(ကြက်ဘီယာ)
007 Cola Chicken(ကိုလာကွကျသား)(ကိုလာကြက်သား)
008 Chicken in Chilli(ကွကျငရုပျသီး)(ကြက်ငရုပ်သီး)
009 Fried Chicken Meat Ball(ကွကျသားလုံးကွျော)(ကြက်သားလုံးကြော်)
010 Singapore Style Chicken Curry(စင်ျကာပူကွကျသားခကျြ)(စင်္ကာပူကြက်သားချက်)
011 Deep Fried Chicken with Salted Plate(ကွကျခွောကျခဉျြငံ)(ကြက်ခြောက်ချဉ်ငံ)
012 Chicken with Basil(ကွကျပငျစိမျး)(ကြက်ပင်စိမ်း)
013 Chicken with Mushroom(ကွကျမှို)(ကြက်မှို)
014 I Bar Style Steamed Chicken with Assorted Meat(အသားစုံကွကျပေါငျး)(အသားစုံကြက်ပေါင်း)
015 Chicken with Casshew Nuts(ကွကျသီဟိုစေ့)(ကြက်သီဟိုစေ့)
016 Kachin Style Chicken Curry(ကွကျကခငျြခကျြ)(ကြက်ကချင်ချက်)
017 Kalatha Style Chiccken Curry(ကွကျကာလသားခကျြ)(ကြက်ကာလသားချက်)
018 Steamed Chicken with Crispy Fish(ကွကျပေါငျးငါးကွှပျ)(ကြက်ပေါင်းငါးကြွပ်)
019 Korea Style Chicken Curry(ကိုရီးယားကွကျသားခကျြ)(ကိုရီးယားကြက်သားချက်)
020 Deep Fried Chicken with Hot & Chilli(ကွကျတုံးခဉျြစပျမှေး)(ကြက်တုံးချဉ်စပ်မွှေး)
021 Golden Chicken Net(ရှကွေကျသိုကျ)(ရွှေကြက်သိုက်)
022 Chicken with Mashed Stiky Rice(ကွကျခေါပုတျ)(ကြက်ခေါပုတ်)
023 Stewed Pork Fore Leg(ဝကျလကျစတူး)(ဝက်လက်စတူး)
024 Stewed Pork with Green Mustard(မုနျညှငျးစိမျးဝကျစတူး)(မုန်ညှင်းစိမ်းဝက်စတူး)
025 Fried Pork Meat Ball(ဝကျသားလုံးကွျော)(ဝက်သားလုံးကြော်)
026 Fried Pork Small Intestine(အူနုခွောကျကွျော)(အူနုခြောက်ကြော်)
027 Fried Spicy Shred Pork(ဝကျမြှငျခွောကျစပျ)(ဝက်မျှင်ခြောက်စပ်)
028 Depp Fried Triplet Pork(ဝကျသုံးထပျသားခွောကျကွျော)(ဝက်သုံးထပ်သားခြောက်ကြော်)
029 Spicy Pork Shred Curry (ဝကျမြှငျအစပျခကျြ)(ဝက်မျှင်အစပ်ချက်)
030 Fried Pork Slice with Basil(ဝကျသားပွားပငျစိမျး)(ဝက်သားပြားပင်စိမ်း)
031 Stewed Boar(တောဝကျစတူး)(တောဝက်စတူး)
032 Spicy Pork Trotter(ဝကျခွထေောကျအစပျ)(ဝက်ခြေထောက်အစပ်)
033 Fried Ankle-Pork Rib(နံရိုးနုကွျော)(နံရိုးနုကြော်)
034 Deep Fried Pork Rib(နံရိုးကွျော)(နံရိုးကြော်)
035 Deep Fried Pork Slice(ဝကျသားပွားခွောကျကွျော)(ဝက်သားပြားခြောက်ကြော်)
036 Cusai Pork Slice(ဝကျသားပွားကြူးဆိုငျ)(ဝက်သားပြားကျူးဆိုင်)
037 Griilled Pork Rib(နံရိုးကငျ)(နံရိုးကင်)
038 Hom Soung Style Pork(ဝကျဟုနျဆောငျး)(ဝက်ဟုန်ဆောင်း)
039 Steamed Pork Belly with Century Egg(သုံးထပျသားဆေးဘဲဥပေါငျး)(သုံးထပ်သားဆေးဘဲဥပေါင်း)
040 I Bar Pork Stewed(ဝကျစတူး)(ဝက်စတူး)
041 Stir Fried Hor & Sour Pork Lever(ဝကျအသဲအစပျကွျော)(ဝက်အသဲအစပ်ကြော်)
042 Pork Sparerib Rocks(နံရိုးကြောကျဆောငျ)(နံရိုးကျောက်ဆောင်)
043 Corned Beef Stewed(အမဲဘို့သားနှပျ)(အမဲဘို့သားနှပ်)
044 Corned Beef Chop(အမဲဘို့သားစတိတျ)(အမဲဘို့သားစတိတ်)
045 Special Hot & Sour Beef Tendon (ရှယ်အမဲကြော်ချဉ်စပ်)(ရှယျအမဲကွျောခဉျြစပျ)
046 Fried Szechuan Dried Beef(စီခြှမျးအမဲသားခွောကျကွျော)(စီချွမ်းအမဲသားခြောက်ကြော်)
047 Fried Beef with Sour Fruit(အမဲသားခဉျြစျောကားသီးကွျော)(အမဲသားချဉ်စော်ကားသီးကြော်)
048 Beef with Chilli(အမဲငရုပျသီး)(အမဲငရုပ်သီး)
049 Fried Beef Rib with Celery(အမဲသားတရုတျနံနံ ၊ နံရိုးကွျော)(အမဲသားတရုတ်နံနံ ၊ နံရိုးကြော်)
050 Beef Marriubone with Curry Powder(အမဲခဉျြဆီမဆလာခကျြ)(အမဲချဉ်ဆီမဆလာချက်)
051 Szechuan Style Beef Slice(စီခြှမျအမဲသားပွားခကျြ)(စီချွမ်အမဲသားပြားချက်)
052 Grilled Beef with Honey(အမဲကငျပြားရညျစမျး)(အမဲကင်ပျားရည်စမ်း)
053 I Bar Deep Fried Dried Mutton(ဆိတျသားခွောကျကွျော)(ဆိတ်သားခြောက်ကြော်)
054 Stewed Mutton(ဆိတျစတူး)(ဆိတ်စတူး)
055 Mutton with Chilli(ဆိတျငရုပျသီး)(ဆိတ်ငရုပ်သီး)
056 Fried Spicy Dried Mutton(ဆိတျသားခွောကျစပျ)(ဆိတ်သားခြောက်စပ်)
057 Steamed Mutton Roast(ဆိတျပေါငျရိုဈ)(ဆိတ်ပေါင်ရိုစ်)
058 Steamed Mutton with Potato(ဆိတျပေါငျအာလူး)(ဆိတ်ပေါင်အာလူး)
059 Grilled Ibex(တောငျဆိတျသားကငျ)(တောင်ဆိတ်သားကင်)
060 Mashed Mutton with Kabab(ဆိတျထောငျးခဲပကျ)(ဆိတ်ထောင်းခဲပက်)
061 Fried Finger Fish with Poppy Seed(ငါးအခြောငျးဘိနျးစေ့)(ငါးအချောင်းဘိန်းစေ့)
062 Malar Fish (Crap)(မာလာငါး)(မာလာငါး)
063 Steamed Seabass Fish with Lemon & Chilli(ငါးပေါငျးသံပုရာ)(ငါးပေါင်းသံပုရာ)
064 Steamed Seabass Fish with Lemon & Chillli(ငါးသံပုရာပေါငျး)(ငါးသံပုရာပေါင်း)
065 Stewed Crap Bellly(ငါးကွငျးဗိုကျသားစတူး)(ငါးကြင်းဗိုက်သားစတူး)
066 Fried Crispy Carp Tail(ငါးကွငျးမွီးကွှတျကွျော)(ငါးကြင်းမြီးကြွတ်ကြော်)
067 Stir Fried Swallow Style Fish(ငါးပြံလှား)(ငါးပျံလွှား)
068 Steamed Catfish with Soya Sauce(ငါးခူကွာညှိ့ပေါငျး)(ငါးခူကြာညှိ့ပေါင်း)
069 Stewed Chopped Fish(in Pickle)(ငါးအတုံးစတူး)(ငါးအတုံးစတူး)
070 Steamed Seabass Fish (Sweet)(ကက်ကတဈအခြိုပေါငျး)(ကက္ကတစ်အချိုပေါင်း)
071 Crispy Fish with Soya Sauce(ငါးကွှပျပဲငပိ)(ငါးကြွပ်ပဲငပိ)
072 Portugal Steamed Fish(ပျေါတူဂီငါးပေါငျး)(ပေါ်တူဂီငါးပေါင်း)
073 Fried Catfish(ငါးခူမှကွျော)(ငါးခူမွကြော်)
074 Dried Fish Seabass(ကက်ကတဈငါးအခွောကျကွျော)(ကက္ကတစ်ငါးအခြောက်ကြော်)
075 Singapore Style Steamed Fish(စင်ျကာပူငါးပေါငျး)(စင်္ကာပူငါးပေါင်း)
076 Thai Style Fish Curry(ယိုးဒယားငါးခကျြ)(ယိုးဒယားငါးချက်)
077 Yunan Style Tofu with Fish(ယူနနျငါးတို့ဟူး)(ယူနန်ငါးတို့ဟူး)
078 Fish Phit Poung(Thai Style)(ငါးဖဈဖောငျ)(ငါးဖစ်ဖောင်)
079 Special Grilled Fish (Soup)(စပါယျရှယျငါးကငျ)(စပါယ်ရှယ်ငါးကင်)
080 Mixed Fruits with Fish Mayonnaise(ငါးသီးစုံမရောနိဈ)(ငါးသီးစုံမရောနိစ်)
081 Stewed Duck(ဘဲစတူး)(ဘဲစတူး)
082 Fried Crispy Duck(ဘဲကွှပျကွျော)(ဘဲကြွပ်ကြော်)
083 Hot & Sour Duck in Beer with Pickled(ဘဲဘီယာခဉျြစပျ)(ဘဲဘီယာချဉ်စပ်)
084 Steamed Punchball Duck(ဘဲပေါငျးအစာသှပျ)(ဘဲပေါင်းအစာသွပ်)
085 Cold Duck Tongue(ဘဲလြှာအအေး)(ဘဲလျှာအအေး)
086 Grilled Duck(ဘဲကငျ)(ဘဲကင်)
087 Prawn with Basil(ပုဇှနျထုပျပငျစိမျး)(ပုဇွန်ထုပ်ပင်စိမ်း)
088 Malar Prawn(ပုဇှနျမာလာ)(ပုဇွန်မာလာ)
089 Sweet & Sour Prawn(ပုဇှနျခြိုခဉျြ)(ပုဇွန်ချိုချဉ်)
090 Hot & Sour Prawn(ပုဇှနျခဉျြစပျ)(ပုဇွန်ချဉ်စပ်)
091 Raw Prawn Salad(ပုဇှနျအစိမျးသုပျ)(ပုဇွန်အစိမ်းသုပ်)
092 Fried Prawn (Plain)(ပုဇှနျပုလိနျးကွျော)(ပုဇွန်ပုလိန်းကြော်)
093 Flower Style Prawn with Kale(ပနျးပုဇှနျ)(ပန်းပုဇွန်)
094 Malaysia Style Prawn Curry(ပုဇှနျမလေးစတိုငျလျ)(ပုဇွန်မလေးစတိုင်လ်)
095 Thai Style Grilled Prawn(ယိုးဒယားပုဇှနျကငျ)(ယိုးဒယားပုဇွန်ကင်)
096 Shan Style Prawn(ရှမျးမားပုဇှနျ)(ရှမ်းမားပုဇွန်)
097 Sweet & Sour Squid (ပွညျကွီးငါးခြိုခဉျြ)(ပြည်ကြီးငါးချိုချဉ်)
098 Hot & Sour Squid (ပွညျကွီးငါးခဉျြစပျ)(ပြည်ကြီးငါးချဉ်စပ်)
099 Stir Fried Squid with Oyster Sauce(ပွညျကွီးငါးခရုဆီ)(ပြည်ကြီးငါးခရုဆီ)
100 Stir Fried Squid with Black Papper Sauce(ပွညျကွီးငါးငရုပျကောငျး)(ပြည်ကြီးငါးငရုပ်ကောင်း)
101 Stir Fried Squit with Soya Bean(ပွညျကွီးငါးပဲငပိ)(ပြည်ကြီးငါးပဲငပိ)
102 Squit Taste Curry(ပွညျကွီးငါးအရသာ)(ပြည်ကြီးငါးအရသာ)
103 Crispy Squit(ပွညျကွီးငါးအကွှပျကွျော)(ပြည်ကြီးငါးအကြွပ်ကြော်)
104 Deep Fried Clamp Crab(ဂဏနျးလကျမကွျော)(ဂဏန်းလက်မကြော်)
105 Steamed Sweet Clamp Crab(ဂဏနျးလကျမအခြိုပေါငျး)(ဂဏန်းလက်မအချိုပေါင်း)
106 Clamp Crab Masalar Curry(ဂဏနျးလကျမမဆလာခကျြ)(ဂဏန်းလက်မမဆလာချက်)
107 Steamed Sweet Soft Shell Crab(ဂဏနျးပြော့အခြိုပေါငျး)(ဂဏန်းပျော့အချိုပေါင်း)
108 Stir Fried Soft Shell Crab with Masalar(ဂဏနျးပြော့မဆလာခကျြ)(ဂဏန်းပျော့မဆလာချက်)
110 Crab with Pure Sesame Oil(ဂဏနျးဆီမှေး)(ဂဏန်းဆီမွှေး)
111 Deep Fried Soft Shell Crab(ဂဏနျးပြော့ကွျော)(ဂဏန်းပျော့ကြော်)
112 Stir Fried Hot & Sour Soft Shell Crab(ဂဏနျးပြော့ခဉျြစပျ)(ဂဏန်းပျော့ချဉ်စပ်)
113 Ousoon Chicken Legs Salaad(ကွကျခွအေျောစှနျးသုပျ)(ကြက်ခြေအော်စွန်းသုပ်)
114 Chicken Salad(ကွကျသားသုပျ)(ကြက်သားသုပ်)
115 Pork Sliced Salad(ဝကျသားပွားသုပျ)(ဝက်သားပြားသုပ်)
116 Beef Sliced Slice(အမဲသားပွားသုပျ)(အမဲသားပြားသုပ်)
117 Squit Salad(ပွညျကွီးငါးသုပျ)(ပြည်ကြီးငါးသုပ်)
118 Century Egg Salad(ဖီတနျသုပျ)(ဖီတန်သုပ်)
119 White Fungus Salad(ကြောကျပှငျ့သုပျ)(ကျောက်ပွင့်သုပ်)
120 3-Kinds of Meats Salad(သုံးမြိုးရှယျသုပျ)(သုံးမျိုးရှယ်သုပ်)
121 Chicken Malar Salad(မာလာကွကျသားသုပျ)(မာလာကြက်သားသုပ်)
122 Thai Style Chicken Salad(ယိုးဒယားကွကျသားသုပျ)(ယိုးဒယားကြက်သားသုပ်)
123 Mushroon Ear with Cucumber Salad(နားရှကျမှိုသခှားသီးသုပျ)(နားရွက်မှိုသခွားသီးသုပ်)
124 Kachin Style Eel Curry(ငါးရှညျ့ကခငျြခကျြ)(ငါးရှည့်ကချင်ချက်)
125 Spicy Eel Curry(ငါးရှညျ့အစပျခကျြ)(ငါးရှည့်အစပ်ချက်)
126 Sweet Eel Curry(ငါးရှညျ့အခြိုခကျြ)(ငါးရှည့်အချိုချက်)
127 Fried Spicy Dried Eel(ငါးရှညျ့ခွောကျစပျ)(ငါးရှည့်ခြောက်စပ်)
128 Fried Dried Eel(ငါးရှညျ့ခွောကျကွျော)(ငါးရှည့်ခြောက်ကြော်)
129 Chicken Clay Pot(ကွကျမွအေိုး)(ကြက်မြေအိုး)
130 Mutton Clay Pot(ဆိတျမွအေိုး)(ဆိတ်မြေအိုး)
131 Eel Clay Pot(ငါးရှညျ့မွအေိုး)(ငါးရှည့်မြေအိုး)
132 Chicken Taro Clay Pot(ကွကျပိနျးဥမွအေိုး)(ကြက်ပိန်းဥမြေအိုး)
133 Pork Prgan Clay Pot(မွအေိုးဝကျစတူး)(မြေအိုးဝက်စတူး)
134 Rakhaine Fish Clay Pot(ရခိုငျငါးမွအေိုး)(ရခိုင်ငါးမြေအိုး)
135 Thai Style Fried Fish Finger(ယိုးဒယားငါးအသားခြောငျးကွျော)(ယိုးဒယားငါးအသားချောင်းကြော်)
136 Fried Crispy Prawn(ပုဇှနျအကွှပျကွျော)(ပုဇွန်အကြွပ်ကြော်)
137 Deep Fried Boar(တောဝကျသားအခွောကျကွျော)(တောဝက်သားအခြောက်ကြော်)
138 Mix Vegetables Tempura(သီးရှကျစုံတနျပူရာ)(သီးရွက်စုံတန်ပူရာ)
139 Malar Fried Finger Potato(မာလာအာလူးခြောငျး)(မာလာအာလူးချောင်း)
141 Fried Watercress(ကနျစှနျးရှကျကွျော)(ကန်စွန်းရွက်ကြော်)
142 Fried Watercress with Mushroom(မှိုကနျစှနျး)(မှိုကန်စွန်း)
143 Fried Kailan with Oyaster Sauce(ကိုကျလနျခရုဆီ)(ကိုက်လန်ခရုဆီ)
144 Fried Asparagus(ကညှတျကွျော)(ကညွှတ်ကြော်)
145 Fried Green Peas with Egg(ကွကျဥရှပေဲသီးကွျော)(ကြက်ဥရွှေပဲသီးကြော်)
146 Fried Chayote Leaves(ဂျေါရခါးညှနျ့ကွျော)(ဂေါ်ရခါးညွှန့်ကြော်)
147 Chinese Beans with Asparagus(ပဲကောကညှတျကွျော)(ပဲကောကညွှတ်ကြော်)
148 Fried Ham with Chinese Cabbage(ဝကျပေါငျခွောကျမုနျညှငျးအဖွူကွျော)(ဝက်ပေါင်ခြောက်မုန်ညှင်းအဖြူကြော်)
149 Fried Mixed Vegetables(သီးရှကျစုံကွျော)(သီးရွက်စုံကြော်)
150 Hot & Sour Japanese Tofu(ဂပြနျတို့ဟူးခဉျြစပျ)(ဂျပန်တို့ဟူးချဉ်စပ်)
151 Marfou Tofu(မာဖော့တို့ဟူး)(မာဖော့တို့ဟူး)
152 Fried Taiwan Green Mushtart(ထိုငျဝမျမုနျညှငျးစိမျးကွျော)(ထိုင်ဝမ်မုန်ညှင်းစိမ်းကြော်)
153 Fried Potato Shared with Capsicum(အာလူးမြှငျငရုပျပှကွျော)(အာလူးမျှင်ငရုပ်ပွကြော်)
154 Fried Japanese Tofu with Kailan(ဂပြနျတို့ဟူးကိုကျလနျကွျော)(ဂျပန်တို့ဟူးကိုက်လန်ကြော်)
155 Fried Cauliflower with Egg(ကွကျဥပနျးပှငျ့ကွျော)(ကြက်ဥပန်းပွင့်ကြော်)
156 Tom Yam Soup(တုနျယမျးဟငျးရညျ)(တုန်ယမ်းဟင်းရည်)
158 Chicken with Quince Soup(ကွကျခဉျြစျောခါးသီးဟငျးရညျ)(ကြက်ချဉ်စော်ခါးသီးဟင်းရည်)
159 Catfish with Quince Soup(ငါးခူခဉျြစျောခါးသီးဟငျးရညျ)(ငါးခူချဉ်စော်ခါးသီးဟင်းရည်)
160 Hot & Sour Fish Head Soup(ငါးခေါငျးဟငျးရညျ)(ငါးခေါင်းဟင်းရည်)
161 Pork Rib with Chinese Cress Soup(ဝကျနံရိုးပေါငျးကွံမဆိုငျဟငျးရညျ)(ဝက်နံရိုးပေါင်းကြံမဆိုင်ဟင်းရည်)
162 Bean Curd with Vegetables Soup(သီးရှကျစုံပံပွားဟငျးရညျ)(သီးရွက်စုံပံပြားဟင်းရည်)
163 Beef Marrowbone Soup(အမဲခဉျြဆီဟငျးရညျ)(အမဲချဉ်ဆီဟင်းရည်)
164 Farmer Soup(လယျသမားဟငျးရညျ)(လယ်သမားဟင်းရည်)
165 Hot Plate(ဟော့ပလိပျ)(ဟော့ပလိပ်)
168 Fried Assorted Meat(အသားစုံကွျော)(အသားစုံကြော်)
167 Deep Fried Five Kinds of Meat(ငါးမြိုးခွောကျကွျော)(ငါးမျိုးခြောက်ကြော်)
168 Pyilonchan Thar (Stir Fried Assorted Meat)(ပွညျလုံးခမျြးသာ)(ပြည်လုံးချမ်းသာ)